AfricArXiv tụgharịrị 2 - AfricaArXiv
bipụtara Fayza Eid Mohammad on 26th June 2020 26th June 2020
Anyị ji obi ụtọ mee ememme abụọnd ncheta nke AfricanArXiv na June 2020. AfricArXiv gbara afọ abụọ ka ọ bụrụ ọrụ ntụgharị maka akara nyocha maka ọrụ nyocha na isi okwu ndị Africa na ndị na-abụghị ndị Africa. Emere ya na June 2018 iji mee ka ịkwado na ịkwado sayensị mepere emepe na ibipụta akwụkwọ na Africa iji bulie mmekorita nyocha n'etiti ndị ọkà mmụta sayensị Africa, na-agba ume mmekorita ụwa ma kwalite ọhụhụ na nyocha Africa.
“AfricaArxiv tụgharịrị afọ abụọ na June 25th. Ọ bụ n’ụbọchị a n’afọ 2018 ka anyị bipụtara akwụkwọ akụkọ nke na-ebido ebido (https://www.cos.io/about/news/center-open-science-and-africarxiv-launch-branded-preprint-service).
Afọ abụọ a abụwo njem dị egwu, enwere m obi ụtọ ịhụ ihe niile a rụzuru rue ugbu a.
Achọrọ m n’ezie ịkele onye ọ bụla kwadobere ụzọ a n’ụzọ ọ bụla kemgbe mbido.
Na ikele ndi oma otu a mere ka ha kwe omume. Ndị nọ ebe ahụ site na mbido, ndị nọ ebe ahụ na mbido ma ha anọghị ebe ahụ, bụ ndị sonyere ndị otu n'ikpeazụ. Ana m ekele gị niile!
A ka nwere ọtụtụ ihe ịma aka ime ka ọchịchị onye kwuo uche ya gbasaa ma gbasaa mbipụta na sayensị mepere emepe na Africa, ekwenyesiri m ike na AfricaArxiv ga-ekere òkè dị mkpa na nke a.
Obi ụtọ na ncheta nke abụọ AfricanArxiv ”
- Justin Sègbédji Ahinon, Onye na-ahụ maka nzụlite AfricaArXiv